खाली खुट्टा हरियोमा हिड्दा हुन्छन् यस्ता चमत्कारी फाइदै फाइदा – List Khabar
Home / रोचक / खाली खुट्टा हरियोमा हिड्दा हुन्छन् यस्ता चमत्कारी फाइदै फाइदा
खाली खुट्टा हरियोमा हिड्दा हुन्छन् यस्ता चमत्कारी फाइदै फाइदा
admin2weeks ago रोचक Leaveacomment 14 Views
हामीले गाडी चाढ्नु भन्दा हिंड्नु स्वास्थ्यको लागि निक्कै फाईदा छ । अझ बिहान हामीले खाली खुट्टा घासमा हिड्यौ भने त झन सुनमा सुगन्ध नै हुन्छ । किनकी बिहानको हिडाइ शरीरको लागि निकै फाइदा जनक छ । नांगो खुट्टा घाँसमा हिड्नुको यस्तो छ फाइदा:
हरियो आँखाको लागि मात्र हैन खुट्टाको लागि पनि उत्तिकै फाईदा छ । विहान विहान ओसमा भिजेको घाँसमा हिड्दा आँखाको ज्योति बढ्छ । यदी हामी बिहानै हरियो घासमा हिड्यौ वा हरियाली बिच रह्यौ भने स्वस्थ र तनाव रहित रहनेछौ । घाँसमा नांगो खुट्टा हिड्दा विस्तारै मांशपेशीमा सुधार आउँछ । साथै ग्रीन थेरापीबाट मष्तिस्कको शक्ति बढ्छ।
मधुमेहको रोगीले हरियो घाँसमा बस्नु र हिड्नु फाइदाजनक कुरा हो । यदि मधुमेह रोगीले दैनिक हरियो घाँसको विचमा बसेर लामो स्वास फेर्छ भने शरीरमा अक्सिजन पुर्ति भएर समस्या समाधान हुन्छ। ग्रीन थेरापीको मुख्य हिस्सा हरियो घाँसमा नांगो खुट्टाले हिडुन् हो । विहान बिहान ओसले भिजेको हरियो घाँसमा हिड्दा खुट्टाको मुनिको कोशिकाबाट मष्तिस्कसम्म राहत पुर्याउँछ । यसले एलर्जी कम गर्छ। तसर्थ अल्छि मानेर हैन स्वास्थ्यलाई ध्यान दिएर हिंड्ने गरौ । फिल्म ‘गुलाबो सिताबो’मा देखिए यस्तो चिन्नै नसकिने अवतारमा
Previous लाखौँ मानिसमध्ये कुनै एकले मात्र देख्छन् यस्तो सपना, तपाईले देख्नुभएको त छैन ?
Next कस्ता कस्ता,व्यक्तिले को,रोना;विरुद्ध खोप लगाउन मिल्दैन ? जानकारी,